Kaniiniga Viagra oo kordhiya kacsiga oo ogolaansho la’aan laga iibsan karo farmishiyadaha Britain… – Hagaag.com
Kaniiniga Viagra oo kordhiya kacsiga oo ogolaansho la’aan laga iibsan karo farmishiyadaha Britain…
Posted on 29 Nofeembar 2017 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Waxa suurto gal ah in Britain aad ka iibsan kartid kaniiniga Viagra oo kor u qaada kacsiga ragga farmashiyaha si toos ah adiga oo aan heysan warqada dhakhtarkaaga.
Go’aanka ayaa la soo saaray iyada oo lagu saleynayo fikradaha jilayaasha bulshada oo aqbashay wakaalada la socodka waxyaabaha caafimaadka.
Waxaa go’aanka iska leh farmashiistaha, sida ku cad tilmaamaha cusub, haddii qofku ka weyn yahay 18 sano, hadduu qaatana aan dhib u keenin.
Shirkada sameysa kaniinigan ee Pfizer ayaa ku rajo weyn in ay gaarsiin doonto farmashiyada Britain kaniiniga Viagra-ha tiro ku filan gu’ga 2018.
Khubarada ayaa sheegay helitaanka kaniinigan uu u sahli doono rag badan oo ku adag in ay booqdaan dhakhtar oo kala hadlaan kacsi la’aanta.
Kacsi yarida ama la’aanta ayaa ah curyaanimo weyn ee ragga, arrintan ogolaanshaha ayaa u leh muhimad in ay helaan daawo ku haboon oo waxtar leh, intii ay raadin lahaayeen daawooyin been abuur ah oo lagu iibiyo Online-ka, taasi oo qofka u keeni karta dhibaato hor leh.
Waxa ka mamnuuc ah in laga iibiyo kaniiniga Viagra-ha qaybaha soo socda:
Dadka qaba cudurka wadnaha oo daran, ama halis u ah cudurka wadnaha.
Dadka qaba cudurka cirrhosis ee ku dhaca beerka
Dadka qaba cudurada kelyaha
Waxaa lagula dardaarmayaa ragga raba in ay isticmaalaan in ay qaadan karaan kaniiniga Viagra hal saac galmada ka hor, mana la ogola in hal kaniini ka badan maalintii la qaato.
Sida laga soo xigtay Hay’adda Caafimaadka Dadweynaha ee Britain oo tirakoob ku sheegtay inta badan ragga Britain ayaa ku guul dareysta in ay kacsadaan ama muddo dheer kacsigooda sii jiro. Sida caadiga ah daalka, murugada, welwelka ama cabida khamri badan ayaa sabab u noqon kara kacsi la’aanta.
Hay’ada ayaa kula talineysa dadka cudurka kacsi la’aanta ku dheeraaday in ay dhakhtarkooda arkaan waayo waxaa dhici kara in dhibaato caafimaad oo qarsoon in ay jirto.
Hay’adda la socota waxyaabaha caafimaadka ayaa kala tashatay 47 qof oo takhasus u leh arrintan Viagra-ha, waxaa 33 ka mid ah u codeeyeen in kaniiniga lagu iibiyo farmishiyaha iyadoo la wadan warqad dhakhtar, 13 wey ka soo horjeesatay, halna wuxuu sheegay inuusan hubin.
Denise Knowles, oo ah khabiir cilmi nafsiga galmada ku takhasustay ayaa ka digtay qaadashada kaniinigan uusan xal u aheyn dhibaatooyinka la xiriira guurka.
Waxay sheegtay, “Inta badan dadkii aan la hadlay ayaa qaba fikrad khaldan in kaniiniga uu siinayo kacsi joogto ah iyo inuu kordhiyo awooda rabitaanka galmada, laakinse ma kordhinayo xirfadahooda, kaniiniga ma ahan sixir xaliya dhibaatooyina lamaanaha.